Booliis | UNSOM
06:11 - 25 Sep
Taliyaha Booliiska UNSOM
“Booliiska UNSOM wuxuu taageerayaa Booliiska Federaalka iyo midka gobollada iyo Wasaaradaha la kala shaqeeya iyo dhinacyada kale ee iskaashiga la leh arrimaha booliiska, taasoo ay isku dubba riddey Wasaaradda Arrimaha Gudaha DF Soomaaliya. Hay’aadka Soomaalida ah ee ku shaqada leh booliiska ayaa si adag uga shaqaynaya dhaqan gelinta Qorshaha Qaran ee Kala Guurka, qorshaynta amaanka doorashada, dhex gelinta ciidamada gobollada ee hay’aadka amaanka qaranka iyo xoojinta federaalaynta. Booliiska UNSOM wuxuu ku faanayaa inuu ciidamadan jaal kula noqdo naqshadaynta geeddi socodyadan faraha badan.”
Booliiska UNSOM ayaa talooyin istaraatiji ah siiya DF Soomaaliya iyo gobollada si loo xoojiyo nidaamka iyo kala dambaynta umadda Soomaaliyeed, si loo dhiso ciidamo karti, la xisaabtan iyo xaquuq ku dhisa adeegyadooda. Booliiska UNSOM ayaa sidoo kale wuxuu si dhow iskaashi ula sameeyaa AMISOM, kooxda QM, saaxiibadda iyo deeq bixiyeyaasha caalamka.
Booliiska UNSOM ayaa waxaa hoggaamiya, MeinolfSchlotmann (Jarmal), waxaana wehliya shaqaale la howlgala oo 19 gaaraya. Booliiska QM ee UNSOM ayaa la geeyay Muqdisho iyo gobollada HirShabelle, Jubaland, Puntland, KG Soomaaliya iyo Somaliland. Wixii ka dambeeyay 1-dii Abriill 2019-kii, 16 sarkaal booliis oo ka kala socda Finland, Germany, Ghana, Malawi, Nepal, Philippines, Sweden, Switzerland iyo Zimbabwe – ayaa u howlgalay UNSOM ahaan.
Habka shaqo ee cusub ee booliiska (NPM)
Booliiska UNSOM ayaa taageeraya dhaqan gelinta habka shaqo ee cusub ee booliiska (NPM) oo laga dhaqan gelinayo heerk federal iyo maamul-goboleed, taasoo ku salaysan heshiiskii Madasha Qaran ee 2016-kii. Heshiiskan ayay dowladdu cusboonaysiisay 16-kii Abriil 2017-kii, waxaana lagu taageeray cahdigii nabadeed ee shirkii London 11-kii Maajo 2017-kii. Habkan cusub ee uu booliisku u shaqaynayo iyo abaabulka qaab-dhismeedkiisa ee heer gobol ayaa warbixin u gudbin doona DF Soomaaliya iyo Wasaaradaha ku shaqada leh arrimaha Booliiska. Wasaarad kasta waxay mas’uul ka noqon doontaa qoridda iyo tababarka booliiska iyadoo wax lagu dhisayo mabaadii’, heer, baahida sida wadareed loogu heshiiyey.
Guddiyada Farsamo ee dusha ka eegaya dhaqan gelinta Qorshahan Shaqo ee Cusub ayaa ka howlgelaya Galmudug, HirShabelle, Jubaland, Puntland iyo KG Soomaaliya. Guddigan Farsamo ayaa waxaa ku jira wakiillo ka socda wasaaradaha ay booliisku hoos tagaan iyo taliyeyaasha sare ee ciidamadooda. Guddiyadu waxay dejiyeen qorshe heer qaran oo ay taageereen Guddiga Amaanka Qaranku 3-dii Diseembar 2017-kii. Mashaariicda muhiimadda la siinayo ee kasoo baxa qorshayaashan ayaa loo bandhigi doonaa beesha caalamka si taageero ku filan loogu helo.
Dhexdhexaadin xabad joojineed
Booliiska UNSOM ayaa bixiya wax barid gaar ah iyo indha indhayn ku fooggan howlaha dhowaantan la bilaabay ee wada jirka ah, iyagoo wada roondayn ay ku sameeynayaan tababarka ilaa 200 oo sarkaal booliis oo ka kala socda Galmudug iyo Puntland iyo sidoo kale taageerada Guddiga Xabbad Joojinta Gaalkacyo oo ah magaalo shaqaaqooyin ka dhacaan.
Saraakiisha booliiska ee ka socda kooxda Mug dhisidda Booliiska QM ayaa loo keenay si AMISOM ugala shaqeeyaan arrimaha lagu indha indhaynayo tababarka wada jirka ah ee unugyo ciidan oo ka kala socda dowladaha labada gobol, kuwaasoo ka qayb qaata xabbad-joojinta.
Hindiseyaal kale oo waxaa jira lagu diyaarinayo Booliiska Bulshada iyadoo lagu wada shaqeeynayo dalladda wadajirka ah ee nidaamka iyo kala dambaynta iyadoo la siinayo agab lagu sugayo amaanka si loo xoojiyo dadaallada lagu adkaynayo mugga howlgallada Booliiska Bulshada loogu tala galay inay sare u qaadaan amaanka iyo badbaadada dadwaynaha Gaalkacyo.
Ka hor tagga iyo joojinta xad-gudubyada jinsiga ku dhisan
Booliiska UNSOM wuxuu si dhow ula shaqeeyaa haweenka UNSOM gaar ahaan unugaha u xil saaran ilaalinta carruurta, dhamaan hay’aadka QM iyo Booliiska Somaaliya si ay iskaga kaashadaan ka hortagga xad-gudubyada galmada la xiriira, kuwa khilaafaadka salka ku haya iyo tacaddiyada carruurta ka dhanka ah. Iskaashigan ayaa looga gol leeyahay in lagu kordhiyo laguna hagaajiyo qiyamka dhibbanayaasha iyo tayada ka war haynta si loo taageero haweenka doonaya in loo qoro Booliiska Soomaaliya, kuwaasoo ah tillaabooyin horay loo qaaday.
Bishii Diseembar 2015-kii, QM ayaa qabatay aqoon is waydaarsi lagu aasaasayo unugo loogu tala galay inay ka jawaabaan arrimaha jinsiga. Tababarrada ayaa diiradda lagu saaray ururinta caddaymaha haddii uu lacalla dhaco xad-gudub jinsi ah, hababka loo waraysto, farsamooyinka loo baahan yahay si loo helo xogo xasaasi ah oo ay bixiyaan dhibbanayaasha, marqaatiyeyaasha iwm oo la siiyay Booliiska Soomaaliya.
Booliiska UNSOM ayaa leh waajibaad horay loogu igmaday oo khuseeya dhanka jinsiga iyo xad-gudubyada la xiriira iyo ciidamada booliiska si guud loogu baraarujiyo aragtiyaha ku dhisan arrimaha jinsiga.
La shaqaynta AMISOM
Booliiska UNSOM ayaa dhiggiisa AMISOM kala shaqaynaya sidii loo tababari lahaa Ciidamadda Booliiska Soomaaliya. Waxaa tababarradan lagu saleeyay mabaadii’da xuquuqda insaanka si loo hubiyo inay Booliiska Soomaalidu qaadaan mas’uuliyadda ka saaran ilaalinta rayidka. Mawaadiicda tababarradan ayaa waxaa ka mid ah Ilaalinta Dadka Gudaha ku Barakacay, Ilaalinta Carruurta ee Khilaafyada Hubaysan, Xuquuqda Insaanka xilliyada Baaritaannada Booliiska iyo Xuquuqda Insaanka maxaabiista.
Booliiska UNSOM ayaa lala meel dhigay kuwa Xarunta AMISOM ee Muqdisho si loo xoojiyo iskaashiga iyo taageerada Howlgallada AMISOM iyo kuwa QM ee UNSOM. Booliiska AMISOM ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan la leh saraakiisha caalamiga ah ee labada ururba ka tirsan.
Kooxo-hoosaadka shaqo ee Booliiska
Kooxo-hoosaadka shaqo ee Booliiska oo ka mid ah hab-howleedka iskaashi ee ay Amaanku ku bedelayaan Booliiskii horay u shaqaynayey, kaasoo ah madal istaraatiji ah oo heer sare ah loogu tala galay adeegyada Ciidamada Booliiska iyo beesha caalamka. Booliiska UNSOM wuxuu taageerayaa Wasaarad Gudeedka DF Soomaaliya iyo Safaaradda Jarmalka oo kooxdan wax ka shir guddoomiya.
Ururkani wuxuu isku xiraa Qaab-dhismeedka Maaraynta Wadajirka ah ee Booliiska, oo ka kooban Guddi Farsamo oo Isku dhaf ah, Golaha Taliyeyaasha Booliiska iyo Golaha Wasiirrada Gudaha oo ay wehliyaan dalalka taageera horumarka Booliiska Soomaaliya.
Guddiga Horumarinta Booliis Xirfadle ah
Booliiska Soomaaliya iyo jaalashiisa caalamiga ah ayaa isku raacay baahida ku aaddan iskaashiga iyo is waafajinta dhamaan howlaha tababarrada iyo horumarinta xirfadaha la xiriira howlaha ee la siiyo Booliiska Soomaaliya – Heer Federaal iyo gobollada intaba. Guddiga Horumarinta Xirfadda Booliiska (PPDB) ayaa waxaa isla guddoomiya Booliiska Soomaaliya iyo Booliiska UNSOM, wuxuuna haatanna wuxuu u shaqeeyaa sidii guddi joogto ahaan dhanka isku xirka iskaashiga iyo is waafajinta dhamaan howlaha tababarrada. PPDB ayaa u xil saaran shahaado siinta, dib u eegista iyo kormeerka howlaha tababarrada.
Xubnaha guddiga horumarinta ayaa waxaa ka mid ah wefdi laga soo saaray Booliiska Soomaaliya – heer federal iyo heer gobolba, wakiillo ka socda ururrada caalamiga ah e la shaqeeya (kuwaasoo ay ka mid yihiin, UNSOM, UNDP, UNODC, AMISOM, EUDEL iyo EUCAP Somalia) iyo wakiillo ka socda saaxiibbada caalamka.
Sanaddii 2017-kii, DF Soomaaliya iyo ururrada Booliiska maamul-goboleedyada ayaa meel marisay aragti cusub oo lagu qaabeeynayo manhaj booliis iyo qorshe lagu tababarayo macallimiinta wax sii tababaraysa si Booliiska Soomaaliyeed ee cusub loo siiyo tababarro isku mid ah. Iyadoo ku salaysan Qorshe Booliiska cusub ee la samaynayo ama la sameeyay heer Federaal iyo heer gobolba ee ka tirsan Dallada Habka Cusub ee Booliisku u shaqeeyo, tababarrada iyo barnaamijyada dambe ee booliisku waxay u baahan doonaan dareen wayn 2018.
Siyaasadda taxaddar u eegista Xuquuqda Insaanka
Booliiska UNSOM wuxuu dhaqan gelinayaa taxaddar u eegista Xuquuqda Insaanka QM isagoo kaalmaynaya qiimaynta halista ciidamada iyo adeegyada aan hoos tegin QM. Tillaabooyin ka hor tag oo siyaasadahan waafaqsan ayaa la dhex geliyey geeddi socodka Qorshaha Cusub ee Booliiska.
QM waxay hubinaysaa in la sameeyo nidaam-booliseed ahmiyad siinaya arrimaha jinsiga dhammaan hawlaha booliiseed, iyadoo arrintaasi muhiim u tahay marka la gudanayo hawl-maalmeedka si wax looga qabto baahiyaha amni ee haweenka, ragga, gabdhaha iyo wiilashaba. Waxaa intaasi dheer, saraakiisha dumarka ee booliiska ah waa inay tusaale wanaagsan u noqdaan sinnaanta shaqo si haweenka iyo gabdhaha loogu dhiirrigeliyo inay u doodaan xuquuqdooda, isla markaana ay raadsadaan shaqooyin la xiriira sharci-fulinta. Sidoo kale, saraakiisha booliiska ee dumarka ah waxay dareen dheeraad ah u leeyihiin amniga haweenka iyo carruurta iyo sidii haweenku farriintooda u soo gaarsiin lahaayeen, kaalmana uga heli lahaayeen hay’adaha sharci-fulinta.
Qaraarka tirsigiisu yahay 2101 (2013) wuxuu UNSOM u igmanayaa inay gacan ka geysato sidii Xukuumadda Federaalka Soomaaliya sare ugu qaadi lahaayd ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo ka-hor-tagga xad-gudubyada la xiriira jinsiga ee ka dhasha colaadaha, iyadoo lagu taageerayo la-taliyeyaal dhinaca arrimaha jinsiga ah.
Read Somalia’s New Policing Model Newsletters
Edition 33 December 2019.pdf
Edition 32 November 2019.pdf
Edition 31 October 2019.pdf
Edition 30 September 2019.pdf
Edition 29 August 2019.pdf
Edition 28 July 2019
Edition 27 June 2019
Edition 26 May 2019
Edition 25 April 2019
Edition 24 March 2019
Edition 23 February 2019
Edition 22, January 2019
Edition 21, December 2018
Edition 20, November 2018
Edition 18, September 2018
Edition 17, August 2018
Edition 16, July 2018
Edition 15, June 2018
Edition 14, May 2018
Edition 13, April 2018
Edition 12, March 2018
Edition 10, January 2018
Edition 9, December 2017
Edition 8, November 2017
Edition 7, October 2017
Edition 6, September 2017
Edition 5, August 2017